Fitondrampanjakàna: Mitady hanakorontana ny tsena efa milamina eo Analakely indray
Faly ny mpivarotra amoron-dalana eo akaikin’ny Espalanade Analakely fa nomen’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana toerana maimpaimpoana ahafahany mivarotra, nefa tsy manelingelina ny fifamoivoizana no manome endrika ny tanàna. Tsena trano vy vaovao, izay ny
Ho vitaina ao anatin’ny 20 andro ny fanitarana sy ny fanatsarana ny tsenan’i Besarety ao amin’ny Boriboritany faha-3 eto Antananarivo Renivohitra, tsena isaky ny talata eto an-drenivohitra. Nidina ifotony nihaino ny fitarainan’ny mpivarotra sy
Tafiditra ao anatin’ny vinan’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ny fanatsarana ny tanàna, indrindra ny tsena eto Antananarivo Renivohitra. Manambara izany indrindra ny delegen’ny Boriboritany fahatelo Rado Andriamamonjisoa fa efa nisy ireo fanatsarana ny tsena
Fadaminana ny mpivarotra amoron-dalana-CUA
Mitohy hatrany ny hetsika fadaminana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ho fanatsarana sy fampandrosoana ny tanàna. Androany maraina dia nanao fandaminana an’ireo mpivarotra amoron-dalana ny kaominina Antananarivo, izay nanomboka tetsy Soarano hatrany amin’ny tetezan’ny Behoririka, ny
Fandaminana ny tsenan’ ny kaominina Antananarivo renivohitra
administrateur jolay 3, 2018 Commentaires fermés
Mba ho fanatsarana sy fitezana an’ireo mpivarotra ary fanadiovana ny tsenan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra dia hisy ny fomba fiasa vaovao hentitra izay hapetrakin’ny kaominina, izay hanomboka tsy ho ela . Tapaka fa tsy maintsy
administrateur martsa 14, 2018 Commentaires fermés
Nisy ny fidinana nataon’ny Sekretera Jeneraly ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, Andriamatoa Heriniaina Razafimahefa sy ny ekipa eo anivon’ny Boriboritany fahatelo tetsy amin’ny Tsenan’ny Besarety ny Alarobia lasa teo. Nijery ny zava-nisy tamin’ireo tsena teny